Raw Parabolan poda (23454-33-3) Vagadziri & Vanotengesa - Fakisi
Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) powder ndiro zita uye zita rekutengeserana kwevanabolic steroid Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate, kazhinji uye isina kurongedzerwa yakadhindurwa seTren Hex kana Trenbolone Hex. Iyo inozivikanwa seine simba rinonyanya kugadziriswa rinowanika vanabolic steroid inoshandiswa nevatambi uye bodybuilders nhasi.
Raw Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) powder (23454-33-3) Tsanangudzo
Raw Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) powder ndiyo protein inoshandiswa hormonal uye yakanakisisa anabolic, inosimudzira mapuroteni synthesis pamwe nekugadzira nitrogen yakanaka. Yakaratidza kuva chibereko chakanakisisa chekusimudzira uswa uye simba mukuvapo kweproteiniti yakakwana uye makorikori, inosimudzira maitiro ezvigadzirwa zvemuviri uye inogona kushandura catabolism.has inotarirwa neanabolic steroid uchishandisa muviri kuvaka uye mutambi wenharaunda. Iyo inowanzozivikanwa sechirwere chemaonda-chiremera, uye inonyanya kufarirwa nevatambi nokuda kwekukwanisa kwayo kukurudzira kuvaka nokukurumidza kwesimba, ukuru hwemasisita, uye tsanangudzo.
Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) powder, hafu yeupenyu hwe steroid ester inowanzoenderana nechiyero chemafuta ekugadzirisa mvura kunogadzikana: w yakareba chain ye ester, yakakwirira ichi chiyero, uye yakareba hafu yeupenyu. Iyi carbonate chaiyo inogona kunyanya kuenzaniswa neananthate ester; iyo hafu-hupenyu inenge iri zvishoma zvishoma kwevhiki.
Kemikari Name cyclohexylmethyl 17-beta-hydroxyestra-4,9,11-Trien -3-one carbonate; ESTRA-4,9,11-TRIEN-3-ONE; Estra-4,9,11-trien-3-one, 17b-hydroxy-, cyclohexylMethylcarbonate (8CI); 4-CDC
muchiso Name Trenbolone Hexahydrobenzyl Carbonate, Parabolan
Molecular Wsere 410.55
Kunyorera Point 90-95 °
Kubikira Point 607.9 ° C
ruvara yellow crystalline powders
APane inogona kushandiswa semishonga yemishonga, steroid hormone, Anabolin. Semhomoni yehomoni nemahomoni anabolic.
Chii chakakosha Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) powder (23454-33-3)?
Trenbolone hexahydrobenzylcarbonate, kana kuti trenbolone cyclohexylmethylcarbonate, inotengeswa pasi pezita rezita rokuti Parabolan uye Hexabolan, inogadzirwa, injected anabolic-androgenic steroid (AAS) yeboka re nandrolone uye anrogen ester - kunyanya, C17β hexahydrobenzylcarbonate (cyclohexylmethylcarbonate ester de trenbolone).
Raw Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate powder ndiyo protein inoshandiswa hormonal uye yakanakisisa anabolic, inogona kukurudzira mapuroteni synthesis pamwe nekugadzira nitrogen yakanaka. Yakaratidza kuva chibereko chakanakisisa chekusimudzira uswa uye simba mukuvapo kweproteiniti yakakwana uye makorikori, inosimudzira maitiro ezvigadzirwa zvemuviri uye inogona kushandura catabolism.has inotarirwa neanabolic steroid uchishandisa muviri kuvaka uye mutambi wenharaunda. Iyo inowanzozivikanwa sechirwere chemaonda-chiremera, uye inonyanya kufarirwa nevatambi nokuda kwekukwanisa kwayo kukurudzira kuvaka nokukurumidza kwesimba, ukuru hwemasisita, uye tsanangudzo.
Iyo Yakakura Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) powder (23454-33-3) Purogiramu
Kutanga Parabolan Cycle
Kutanga Parabolan cycle muenzaniso (12 vhiki yakazara nguva nguva)
- Testosterone Cypionate pa 500mg / vhiki
- Parabolan (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate) pa 228mg / vhiki
Mutsamba wakadaro Parabolan cycle ndeyokutanga kwevaya vane ruzivo rwevanabolic steroid vangosvika mukushandiswa kweParabolan. Testosterone Cypionate, kushandiswa kwenguva refu kwe Testosterone pamuviri wekuvaka muviri we500mg / vhiki inowanzoiswa pamwe chete neParololan nekuda kwekuda kwavo kusinganzwisisiki. Zvose zviri zviviri zvinoratidzira hafu yehupenyu-nehuwandu hwekusunungurwa. Ichi chinotanga Parabolan cycle inogona kuenzanisirwa sekunyunyutira kana kuwanda kwekuita mhirizhonga pamusana pemitemo inoshandiswa.
Paramolate Parabolan Cycle
Parmolate Parabolan cycle muenzaniso (masvondo e14 kukwana nguva nguva)
- Testosterone Enanthate pa 100mg / vhiki
- Parabolan (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate) pa 350mg / vhiki
- Equipoise (Boldenone Undecylenate) pa400mg / vhiki
Mavhiki 1 - 6:
- Dianabol (Methandrostenolone) pa 25mg / zuva
Iyi iri pakati peParabolan cycle inogona kuenzanisirwa seimwe kubvongodza kana kuwandisa kuwanikwa, uye inobatanidza matatu anabolic steroid yakafanana mukusunungurwa kwemitengo uye hafu yeupenyu. Testosterone Enanthate inoshandiswa paTT dose ye100mg / vhiki, nepo Equipoise inoshandiswa pa 400mg / vhiki. Izvi zvinofanirwa kuve nehuwandu hwehuwandu hwekunakidza, kunze kwekugona kwe Dianabol. Dianabol inowanikwa pakutanga kwekutanga uye inomhanya kusvika vhiki ye6 kuitira kuti itange kutanga mhirizhonga. Kick kutanga ndiko kuedza kukanda mune imwe kamuti (kazhinji anonyora anabolic steroid) iyo ichaita kuti ropa rema plasma rive nokukurumidza mumavhiki mashomanana okutanga apo iyo yakareba maitiro emagetsi anowedzera zvishoma muhurongwa hwemushandisi. Kushandiswa kwekambani yekutsvaga kwakagadzirwa kuitira kuti musikana awane ruzivo mukati memavhiki ekutanga mashoma apo ivo vangave vasati vaona kuchinja kwakanyanya kubva kumakemikari kwenguva refu ari oga.
Yakagadzirwa neParabolan Cycle
Parmolate Parabolan cycle muenzaniso (masvondo e12 kukwana nguva nguva)
- Parabolan (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate) pa 500mg / vhiki
- Primobolan (Methenolone Enanthate) pa 1,000mg / vhiki
- Oral Winstrol (Stanozolol) pa50mg / zuva
Iyi iri pakati peParabolan cycle inotsanangurwa nyore nyore sepamberi yekukwikwidza kana kukwegura kunoshandiswa apo kurasikirwa kwemafuta kana kuonda kwakawanda (pamwe nemafuta maduku kana mvura kuwana / kuchengetedza sezvinobvira) inoda. Kamwezve, maitiro akangofanana akadaro maererano nehafu yehupenyu anoshandiswa pamwechete. Testosterone Enanthate inobviswa panzvimbo yekutsigira yeTrT zvakare. Primobolan, anodiwa pakati pekukwikwidzana kwemuviri (kunyanya pakugadzirira kushanda) inoshandiswa uye zvikomborero zvakagadzirirwa kubva pamushonga mukuru zvinogona kubatsira pakuwana kutarisa kwakaoma uye kwakanyanyisa kwemuviri, kunyanya apo Parabolan inoshandiswa. Kushandiswa kweWinstrol (muromo maitiro) haisi kungoita chinangwa chechimwe chikwata, asiwo kubatsira mudzidzi mukubudirira, kutsemuka, uye kutaridzika kune muviri.
Parabolan is steroid anabolic inotakura simba rakanyanya kufanana. Imwe ampule yeParabolan inotakura 76mg pamamiriyoni. Izvi zvinokupa 50mg yekushanda Trenbolone per ampule. Mune chirongwa chekurapa, Parabolan yaiwanzogadziriswa nguva 3 pamwedzi kana imwe ampule mazuva ose e10. Nechinangwa chekusimudzira kushanda, 3-4 ampules pavhiki inowanikwa zvikuru uye inofanira kubudisa zviitiko zvinokosha. Mizinga yakakwirira inogona kuedzwa, zvichida 5-6 ampules pavhiki uye haisi isiri. Zvisinei, vazhinji vachawana 3-4 pavhiki kuti vave zvose zvavanoda.
Pasinei nehuwandu hwemadhora, masvondo e8-10 anoshandiswa akafanana. Izvi hazvirevi kuti kukwana kwevanabolic steroids ndevhiki ye8-10 asi inomiririra chikamu cheParabolan cherongwa. Parabolan ichavhara zvakanaka kwazvo nevana vanalic steroid. Sarudza zvishoma steroid iyo inokodzera zvaunoda zvakanakisisa kuti iwe uite. Zvirongwa izvi zvinogona kusanganisira Masteron naWinstrol munguva yekucheka pamwe ne testosterone yakakwana. Munguva yekubvongodza zvikamu zvakawanda zve testosterone zvichashanda maererano neTrenbolone pamwe nekukwanisa kuwedzerwa kweAnadrol kana Dianabol.
Raw Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) powder (23454-33-3) Makomborero
Parabolan inonyanya anabolic steroid ine zvikomborero zvizhinji. Inonyanya kushandiswa nevatambi, vashandi, uye chero ani zvake ari kutarisa kuwanda kana kuderedza ure uye kukura kutsungirira kwavo. Zita rayo rezvesayenzi ndiTrenbolone Hexahydrobenzylcarbonate. Steroid inowedzera simba kune dzimwe androgenic uye anabolic steroid mumusika uye haigoni kufananidzwa ne testosterone chaiyo-inowanzoitika.
Parabolan inonyanya kushandiswa uye inobatsira zvikuru kana mirayiridzo yekushandiswa inoteverwa kune yekupedzisira. Iyo inonyanya kushandiswa pakuvaka musuru uye ichi ndechokuita kwayo nitrogen kuchengetedza simba, iyo inotungamirira kukusimudzira mapuroteni synthesis. Mapuroteni ndiwo masvingo ekuvaka masimba uye naizvozvo, kuwedzerwa kweprotini synthesis kunotungamirira ku bulking up. Inowedzerawo tsvuku dzeropa rekuyera uye nekuti masero matsvuku eropa ane mutoro wekutakura okisijeni kumasumbu uye mishonga zvakapoteredza muviri, izvi zvinobatsira kuvaka kuvimbika. Nokudaro, iwe haunganeta nekutsanya kana uchishanda kunze kana kuita chero rimwe basa rakaoma. Izvi zvinonyanya kubatsira vatambi uye vanokwikwidzana. Parabolan inobatsirawo muviri kuti udzoke nokukurumidza mushure mekuita basa rakaoma kana mushure mekukuvara.
Kusiyana nedzimwe vana vanabolic steroids, Parabolan inowedzera muviri wemetabolism uye naizvozvo inobatsira nekurema. Steroid inhibisa chiito chemahomoni anokonzera kuwedzera kuburikidza nekusimudzira kushanduka kwemashuga kuva mafuta pane kuvhuna. Iyo inowedzerawo kuwandisa kwehutano, zvichiita kuti muviri uwane zvikomborero zvakawanda kubva kune zvinovaka muzvokudya zvinopedzwa.
Tenga Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) powder kubva kuBuasas.com